Andriy Yarmolenko Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
ikhaya IIMALI ZE-EUROPE Andriy Yarmolenko Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlawu yebhola eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Entsha Sheva". Ibali lethu leAndriy Yarmolenko lobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
UAndriy Yarmolenko Ibali loBomi- Uhlalutyo
Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala kunye nemvelaphi yosapho, imfundo kunye nokwakha ikhosi, ubomi bomsebenzi wasemva, indlela eya kwibali lodumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubudlelwane, ubomi bomntu, ubomi bosapho, indlela yokuphila.
Ewe, wonke umntu ubona i-Yarmolenko njengomgcini webhola onamehlo okufumana amanqaku. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography ka-Andriy Yarmolenko enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UAndriy Yarmolenko wazalwa ngomhla we-23rd ka-Okthobha u-1989 kunina, uValentyna Yarmolenko noyise, uMykola Yarmolenko kwidolophu yase-Russian e-Saint Petersburg. Ungumntwana wokuqala kubantwana ababini ozelwe othandekayo onwabile-ngathi abazali aboniswe ngezantsi.
U-Andriy Yarmolenko's Utata kunye noMama kwimo yokubetha. Ikhredithi kwi-IG
Bobabini abazali baka-Andriy Yarmolenko ngabaseUkraine. Baye bagqiba kwelokuba babe nabantwana babo kwisixeko saseRussia i-Saint Petersburg. Onke amalungu osapho luka-Andriy Yarmolenko imvelaphi yabo ivela eKulykivka Raion, eChernihiv Oblast, eMantla Ukraine. Ngoku makhe ndikuxelele isizathu sokuba abazali bakhe bafudukele eRashiya.
Emva komtshato phakathi kwabazali bakhe, umama ka-Andriy wanikwa umsebenzi ohlawula imali eninzi kwidolophu yaseRussia eSt. Ugqibe kwelokuba ashiye umyeni wakhe osandul 'ukutshata eUkraine ukuba aye kuhlala eRussia. Kungekudala emva kokuba uAndriy ezelwe eRussia, utata wakhe wasuka eUkraine waya kujoyina umama wakhe.
UAndriy Yarmolenko ukhulele kusapho olukumgangatho ophakathi apho sinokuthathela ingqalelo ukuba umamakhe ungowokuxhasa iintsapho ngomsebenzi wakhe eRussia. Wena ngelinye ixesha ngelixa uYarmolenko omncinci wayesengumfana, abazali bakhe benza i-u-Turn yokuhlala. Ngenxa yezizathu ezingaziwayo, olu sapho lufudukele kwilizwe lazo lomthonyama- isixeko saseChernihiv, eMantla Ukiraine ngexesha elincinci uAndriy Yarmolenko wayeyinkwenkwe nje.
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ukufundiswa kwebhola kwaqala eChernihiv, idolophu yaseUkraine apho uYarmolenko akhulela khona. Emva phayaa, i-legend yase-Ukraine ne-AC Milan uAndriy Shevchenko wayengumdlali webhola ekhatywayo. KuYarmolenko, yayimalunga nokulandela inyawo lesithixo sakhe ngelo xesha owayedlala kwaye esaphula iingxelo kuDynamo Kyiv.
UAndriy Yarmolenko wazenzela uShevchenko ngexesha leentsuku zakhe zokuqala. Ityala kwi Irediyo yasimahla yeRopa
Njengomntwana omncinci, uAndriy Yarmolenko ndinomdla kwiingqokelela ezintsha zeethoyi. Into awayeyifuna yayiyibhola ekhatywayo. HUkunceda imbali yebhola ekhatywayo (uAndriy) njengamagama akhe, kuyinto eqhelekileyo ukuba inkwenkwana iwuthande umdlalo omnandi.
Njengakwindawo yokubhala, eyona nkumbulo ibalaseleyo yobuntwana bukaYarmolenko igcinwe njenge tattoo ezandleni. Apha ngezantsi kukho umfanekiso we tattoo ka-Andriy Yarmolenko emfanisa eyinkwenkwana ebhola ekhatywayo ebukele ibhola ephethe umpu.
UAndriy Yarmolenko wezeMfundo kunye noMsebenzi oYakhayo. Ityala kwi WTFoot
U-Yarmolenko wayeluhlobo lomntwana owayeya kuthatha ibhola yebhola naphi na apho aya khona. Kwabazali bakhe, akukhange kubekho mathandabuzo okuba wayehamba ngendlela eyiyo njengoko kubonakala kwimfuno yakhe egqithayo yokufumana amanqaku ngaphezulu. Xa wabizelwa ityala lakhe lokuqala lebhola, ulonwabo lwabazali bakhe aluzange lubekho mda.
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
U-Yunist Chernihiv iklabhu yasekhaya kwisixeko sakhe yamkela i-Yarmolenko kwi-rost yayo ye-academy emva kwetyala elinempumelelo kunye nabo ngonyaka we-2002. I-Yarmolenko enebhongo kakhulu eyayinomdla wokuphumelela yalwa ngendlela yezinye iiklabhu zolutsha ezintathu ezizezi; UDesna Chernihiv, uLokomotyv kunye noVidradnyi Kyiv phakathi kweminyaka ye-2002 ukuya kwi-2004.
Ngonyaka we-2004, u-Yarmolenko wenza isigqibo sokubuyela eChernihiv, iklabhu eqale umsebenzi wakhe wobutsha ngenxa yokungakwazi kwakhe ukunyanzela iimfuno zoqeqesho ezivela kwiiklabhu zangaphambili. Wahlala noJunist Chernihiv ixesha elongezelelekileyo le2 lamaxesha awathi wambona ethweswa isidanga ngaphambi kokuba afudukele kwenye iklabhu (i-Desna Chernihiv) ukuqala umsebenzi wakhe omkhulu.
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Ngelixa e-Desna Chernihiv, uAndriy omncinci waqala wabona amathuba okudlala ibhola yakhe eYurophu. Ngaye, yayinye kuphela indlela yokuphuma- leyo yile; Ukulandela ikhondo lomsebenzi wesithixo sakhe-uAndriy Shevchenko.
Ngenxa yokulindela okukhulu okubekwe kwiimvavanyo kunye noDynamo Kyiv, isiguli uYarmolenko wagqiba kwelokuba awushiye phantsi umsebenzi wakhe ngokujoyina iqela lolutsha lweklabhu ebizwa- Dynamo-2 Kyiv. Ngoxinzelelo oluncinci, wasebenza wangena kwiqela eliphezulu leqela.
Nge-11 ngoMeyi 2008, amaphupha e-Yarmolenko amaphulo okugcwala kwiqela eliphambili laseDynamo afezekiseka. Ngelixa wayesetyenziswa njengendawo yasekhohlo kunye neziko eliphambili, waqhubela phambili amanqaku amanqaku e-99, umbonakalo obelubizwa ngokuba "Andriy Shevchenko omtsha / I-Sheva eNtsha”Ziintatheli. Ukunyuka kukaAndriy Yarmolenko meteoric kumbona ephumelela imbasa yeqela.
Andriy Yarmolenko Indlela eya kwiNdaba yeFame. Ityala kwi I-FC Dynamo Kiev kunye IG
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
Njengase2017 iiklabhu ezininzi eziphambili zaseYurophu zaqala ukubeka uxinzelelo kwinkwenkwe yenkanyezi ngenxa yeempawu zayo yomzimba olungileyo, ukudubula kunye nesantya. U-Borussia Dortmund waphumelela phakathi koluhlu lweeklabhu eziphezulu ezibuza emadolweni ukusayina kwakhe. U-Yarmolenko akahlalanga kwiklabhu ixesha elide ngokuza okunkcenkceshela ngomlomo angakwazanga ukumelana nako.
Ukukhawuleza phambili kwi-On 11 kaJulayi 2019, u-Yarmolenko okwangoku uyonwabela ibhola yakhe e-Westham FC apho asekwa khona ubudlelwane obonakalayo kunye neqela lakhe ingakumbi uMark Noble- inkokheli yokomoya yeklabhu emondla ngokudlula njengoko esika ilungelo lokufumana amanqaku.
UAndriy Yarmolenko ubhiyozela ukuphumelela kwe-westham kunye noMark Nobile. Ityala kwi KuFootballFaithful
Wena ngewungekhe wafikelela kubude obumiselwe yintsomi yase-Ukranian u-Andriy Shevchenko, kodwa u-Yarmolenko, ngaphandle kwamathandabuzo, uyinxalenye ebalulekileyo umgca wokuvelisa ongenasiphelo wabadlali abahlaselayo ukuba baphume e-Ukraine. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Njengoko intetho ihamba; emva kwendoda ephumeleleyo, kukho umfazi. Kule meko, ngasemva kwayo nayiphi na ibhola ekhatywayo ephumeleleyo, ngokwenene kukho intombazana ezithobileyo okanye uWag. Ngokuphathelele ukuphumelela, unyaka we-2011, xa uYarmolenko ephumelele umdlali we-Ukraine wePremier League awuzukulibaleka.
Lo ibingunyaka uYarmolenko atshata ngayo nentombi yakhe emva koko eya ngegama-Inna. Ubusazi?… Inkosikazi yaseYarmolenko yingcali kwezangaphandle kwaye ikwangumlawuli we-American Charity Fund. Le nyaniso ityhila ukuba uphilile kwaye ufundile.
Dibana noMfazi ka-Andriy Yarmolenko- u-Inna Yarmolenko. Ikhredithi kwi-IG
Ngokudibeneyo, bobabini indoda nomfazi basikelelekile ngoonyana ababini abahle abahamba ngamagama abo u-Ivan noDanylo. U-Ivan ongunyana omkhulu wazalwa ngosuku lwe-22nd ngoMeyi 2013. Apha ngezantsi kukho umfanekiso woonyana bobabini njengoko banandipha ixesha elifanelekileyo epakini.
UAndriy Yarmolenko unoonyana abathathu- uDanylo (Ekhohlo) no-Ivan (Ekunene)
Njengomzali, u-Andriy Yarmolenko uyakutyala, uxanduva lokubeka isiseko sokulandelelana kwakhe ngelixa abantwana bakhe. Kunokuba nzima kuye ukujongana nomhlala phantsi xa ixesha selifikile, ngenxa yoko isidingo sokuqhubeka nokuphila amaphupha akhe nokuba ngomnye woonyana bakhe.
UAndriy Yarmolenko ubumba unyana wakhe uIvan ngokulandela urhwebo
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi uAndriy Yarmolenko ngobomi bakhe kude nesandi sokudlala kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo lomntu wakhe.
Ngaphandle kwesandi, i-Yarmolenko inobuhlobo kakhulu, i-eccentric, inomdlandla kwaye inokulungelelanisa ngokulula kulo lonke uhlobo lwamandla amngqongileyo. Abalandeli abamaziyo ngaphandle kwebhola bangayonwabela kakhulu inkampani yakhe.
Ukwazi uAriyy Yarmolenko Ubomi baBo buqu bungakhutshwa ngumdlalo. Ikhredithi kwi-IG
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
Kwangoko, yayimalunga nokufudukela eRashiya ukuya kukhangela indlela engcono yokuphila. Namhlanje, uValentyna noMykola okufanekiselwe ngezantsi bazenzele indlela eya kwinkululeko yemali kunyana wabo.
Andriy Yarmolenko ngumama notata wakhe. Ikhredithi kwi-IG
Ngelixa utata ka-Andriy Yarmolenko uMykola egcina kude kwimithombo yeendaba, okufanayo akuyonyaniso ngomfazi wakhe kunye nentombi yakhe. Ngezantsi umfanekiso weValentyna phantsi kwesibhakabhaka esicacileyo kunye nentombi yakhe ekuphela kwayo.
Andriy Yarmolenko Umama kunye noDade. IiCredits: IG
Amaxesha omhla wokuzalwa angamaxesha okonwaba kusapho lakwaYarmolenko. Apha ngezantsi kukho ifoto IsiUkraine phambili kunye nentombi kadadewabo ngomhla wokuzalwa kwakhe. Ukuzinikela kwakhe ekuqinisekiseni ukuba kuphela komntakwabo kodwa ukhululekile ngokuzibophelela kuye.
Andriy Yarmolenko Sista. Ikhredithi kwi-IG
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - LifeStyle
Ukugweba kwisibambo sakhe seendaba zentlalo, kubonakala u-Andriy Yarmolenko ungumdlali webhola onobulumko osindisa imali ngemini yemvula. Akukho zimpawu zenkcitho enzima kunye nokuphila ubomi obuzolile njengoko kuqatshelwe ziimoto ezintle kunye nezindlu ezintle.
Andriy Yarmolenko Indlela yokuphila. Ikhredithi kwi-IG
Andriy Yarmolenko Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Ubaleka okude: Kumdlalo wango-Okthobha u-2015, u-Andriy Yarmolenko wenza umngeni onobungozi ophantse waphula umlenze welinye iqela lomchasi we Shakhtar Donetsk ogama lingu Taras Stepanenko. Aba babini baxolelaniswe emva komdlalo kwaye batshintshana ngeejezi, kodwa emva koko, uYarmolenko waphosa ihempe kaStepanenko emhlabeni ngelixa ebonga abalandeli bakaDynamo. Kwakhona, komnye umdlalo, u-Yarmolenko ukhabe uStepanenko emva kokuba umdlali we-Shakhtar eqabele ibheji yakhe kwaye wabhiyozela ngokukhohlakeleyo phambi kwabalandeli bakaDynamo ngexesha lokuphumelela kwakhe kwe3-0.
Ukungqinelana kwabo kukhokelele kwingxabano enkulu phakathi kwamaqela kwaye ngaxa lithile, kwakungathi lonke iqela lesizwe lase-Ukranian lisemfazweni. Kutheni iqela le-Ukranian? Kungenxa yokuba uninzi lwe-Euro 2016 yayixhomekeke kubadlali abasuka eDynamo naseShakhtar Donetsk. Isigculelo esiqale kubo bobabini abadlali sothuse ukuphazamisa ilizwe i-Euro 2016 izicwangciso de bobabini abadlali aboniswe ngezantsi kufuneka benze uxolo, bebeka ilizwe labo kuqala kunabo.
UAndriy Yarmolenko noTaras Stepanenko kwafuneka babeke ilizwe labo kwindawo yokuqala. Ityala kwi BBC kwaye DailyMail
Inombolo yakhe engenakuthelekiswa nembeko: Mhlawumbi unokuba uthathe ingqalelo yeYarmolenko ngexesha lokuhlala kwakhe eDortmund okanye e-Westham. Kodwa ongakwaziyo yile; uyintsomi kwilizwe lakhe. IYarmolenko yayilawulwa kwibhola ekhatywayo yebhola yaseUkraine kunye nebhola laseUkraine ngokubanzi kwiminyaka eliqwalaselweyo kwimibeko yakhe engezantsi
Andriy Yarmolenko Untold Facts- Abahlonitshwa bakhe abaninzi. Ikhredithi kwi-Wikipedia
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu le-Andriy Yarmolenko Ubuntwana kunye neNqaku le-Biold ye-Untold. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Idayari yebhola yaseUkraine
I-West Ham yeDlalo
I-Freddie Ljungberg Ibali lomntwana i-Untold Biography Facts
I-Oleksandr Zinchenko Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Issa Diop Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Alexander Isak Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts
UTotch Tuchel Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Iindaba zeMichail Antonio Childhood Plus I-Untold Biography Facts
IJadon Sancho Ibali leNtsana ngeNgcaciso ye-Biography
I-Declan Rice Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Sokratis Papastathopoulos Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
vannyhenrico - Februwari 18, 2020
UMarcelo Brozovic Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku leMbiniso yoBuntwana
Februwari 16, 2020
I-Mason Holgate Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Mold
Februwari 15, 2020
vannyhenrico - Februwari 18, 2020 0
vannyhenrico - Februwari 16, 2020 0
Februwari 18, 2020
I-Adnan Januzaj Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Julayi 6, 2018
I-Manuel Lanzini Ibali leBantwana leNdaba yeNgxelo ye-Untold Biography Facts
Agasti 19, 2018
I-Story ye-Childhood ye-Michy Batshuayi I-Untold Biography Facts
Agasti 18, 2018
IJarmain Defoe Ibali leBantwana leNdaba ye-Untold Biography Facts
Matshi 25, 2018